Accueil > Gazetin'ny nosy > Toliara: Nitokona ny mpampianatry ny Lycée Laurent Botokeky
Toliara: Nitokona ny mpampianatry ny Lycée Laurent Botokeky
Noho ny tsikombakomba maloto manjaka sy mahazo vahana , noho ny kiantrano antrano, noho ny kolikoly, ny tsy fahaiza-mitantana mbamin’ny tsy fahombiazana amin’ny fitantanana ny Lycée Laurent Botokeky ao Toliara dia nitokona ny mpampianatra tao omaly, ary nikatso tanteraka ny fampianarana. Notakian’izy ireo ny fialan’ny tale (proviseur).
Ary satria mahatsapa ny mpampianatra any amin’iny faritra Atsimo Andrefan’ny Nosy iny fa « tompon’andraikitra amin’ny tsy fihodinan’ny tontolom-panabeazana any an-toerana ny talem-paritry ny fanabeazam-pirenena (Dren) any, sady manampatra fahefana koa, dia takian’izy ireo koa ny fialany. Miantso ny fitondram-panjakana eo anivon’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena ny any Toliara handray andraikitra fa tsy hamela ny mpanararao-pahefana hiliba nefa hamono sy hamotika ny zana-bahoaka any, rehefa tsy mahatsapa tena hiala ireo mpitantana ireo.
Fa isan’ny fanamparam-pahefan’ny talem-paritry ny fanabeazam-pirenena any Atsimo Andrefana koa ny fanapahany ny karaman’izay mpampianatra Fram tsy manaiky hanompo ny antokom-panjakana Hvm.